Zimbabwe govt issues instructions on burial of fallen popular opposition politician
Zimbabwe govt issues instructions on burial of fallen popular opposition politician
Already the Zimbabwean government had directed its embassy in South Africa to make payments for all costs involved in the burial of the leader of opposition Mor
15 February 2018 Thursday 17:11
INSTRUCTIONS have been announced on how the fallen most known politician in Zimbabwe will be buried as the date has not yet known.
Already the Zimbabwean government had directed its embassy in South Africa to make payments for all costs involved in the burial of the leader of opposition Morgan Tsavangirai who had died in Pretoria yesterday.
According to the Presidential spokesman George Charamba, Zimbabwe is ready to help foot the bill for the funeral arrangements of Tsvangirai in a tribute to the opposition leader who died after a long battle with cancer.
Zimbabwe’s new president, Emmerson Mnangagwa, has made no public statement yet on the former trade union leader’s death
Reuters reported that Tsvangirai’s death on Wednesday in a South African hospital cast his Movement for Democratic Change party into unknown territory less than three months after the army ousted Zimbabwe’s veteran ruler Robert Mugabe.
Arguably Zimbabwe’s most popular politician, Tsvangirai’s career was ultimately defined by his tussles - bother literal and figurative - with 93-year-old Mugabe, who resigned after a de facto coup in December.
Voting are due within the next six months in Zimbabwe and Tsvangirai’s death leaves his party in disarray, to the advantage of the ruling ZANU-PF party.
Zimbabwean GovernmentMorgan Tsavangirai